WeMedia: Fomba Iray Hilazana azy Ireo Izay Eritreritrao · Global Voices teny Malagasy
Natao tany Miami (26-28 Febroary 2008) ny Fivoriamben'ny WeMedia
Voadika ny 05 Janoary 2018 6:22 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, 日本語, 简体中文, 繁體中文, English
(Fanamarihana: tamin'ny 14 Desambra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Inona no holazainao momba ireo ny indostiria nomerika mpitari-dalan miisa 300 eto amin'izao tontolo izao?
Natao tany Miami (26-28 Febroary 2008) ny Fivoriamben'ny WeMedia, ary noho ny fanohanana avy amin'ny The Ethics and Excellence in Journalism Foundation (Orina Mpanasoa ho an'ny Etika sy ny Asa Fampitam-baovao an_tsoratra), notoloran'ny mpikarakara (iFocos) vatsy nandoavana ny saram-pisoratana anarana sy ny saran-dalana miainga avy any amin'ny firenena misy azy ireo na aiza na aiza ireo bilaogera, mpampianatra sekoly ambony, na mpikatroka vitsivitsy tsara vintana sy mampiasa ny teknolojia mba hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa .
Tonga tany an-toerana ihany koa ireo bilaogera ao amin'ny Global Voices ary nanolotra ny fomba fijery mitsikera amin'ny ankapobeny momba ny fampitam-baovao vaovao, tahaka ny nataon'ny ekipanay tamin'ny taona 2006.
Tsotra ny fangatahana fisoratana anarana. Nilaina ny namaly ireo fanontaniana telo momba ny antony fanirianao handeha ho any an-toerana, ahoana ny fomba tianao atao mba hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa, ary inona ny fitaovam-pifandraisana antserasera omenao lanja indrindra. Afaka nanao fangatahana avokoa ny rehetra. Samy nangataka ny visa-ny manokana ho any Etazonia sy ny toerana hivantanany ireo tsara vintana ka voafidy soa aman-tsara .